Software - Isbarbardhiga
Meta waxay doonaysaa in muuqaalka muuqaalka ah uu u ekaado nolosha dhabta ah
Meta iyo koox cilmi-baarayaal ah oo ka tirsan Jaamacadda Texas ee Austin (UT Austin) waxay ka shaqeynayaan inay keenaan dhawaaq dhab ah Metaverse. Sida Kristen Garuman, Agaasimaha Cilmi-baarista Meta AI (u furmay tab cusub) ayaa sharaxaya, xaqiiqada la kordhiyay. ..
Microsoft hadda ma rabto AI inay aqoonsato shucuurtaada, gaar ahaan
Microsoft waxa ay cusboonaysiisay heerkeeda AI ee Mas'uulka ah waxana ay daaha ka qaaday in ay ka saarayso awoodaha aqoonsiga wejiga iyo dareenka ee Azure Face (inta badan).
App-ka cusub ee IKEA ee iPhone wuxuu dooxi karaa oo bedeli karaa alaabtaadii hore
Astaanta alaabta guryaha ee Sweden IKEA waxay haysataa App-ka cusub ee iPhone ee Maraykanka kaas oo isticmaala sirdoonka macmal ah iyo xaqiiqada la kordhiyey si uu kuugu badalo alaabtaada hadda wax cusub oo ka mid ah buug-yaraha.
Cusboonaysiinta dabacsanaantu waxay u keeni doontaa xoogaa is-kadis ah jadwalkaaga shaqo ee adag
Slack waxay diyaarinaysaa casriyeyn ay ku samaynayso madal wada shaqayneed oo loogu talagalay in lagu dhiirigaliyo wada xaajoodyada lama filaanka ah ee ka dhex dhaca asxaabta.
Google ayaa qarka u saaran inuu ku qasbo G Suite-loaders inay qufacaan, shirkaduhuna waa waalan yihiin
Dhowr shirkadood ayaa dajiyay qorshe Google si ay u damiso nooca bilaashka ah ee alaabtii hore ee G Suite.Sida New York Times ku warantay, dhowr milkiileyaal ganacsi ayaa la fahmi karo kuma faraxsana isku dayga Google uu ku doonayo inuu ku dhex geliyo xirmooyin softiweer ah.
Apple waa maqlay oohintaada: iOS 16 ayaa kuu dhamaystiri doonta captchs
Haddii aad la kulanto captcha kaa diidaya inaad soo gasho boostadaada ama meel kale, iOS 16 waxay kuu samayn kartaa koodka dheeraadka ah ee server-yada martigeliya mareegaha iyo apps-ka.Haddii aanad aqoon u lahayn, captchas waa pop-ups yar. ...